Huawei P20 Lite: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း | Androidsis
Huawei P20 Lite - ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားကဒီအဆင့်ကိုပဲအလောင်းအစားလုပ်တယ်
Huawei သည်ပဲရစ်မြို့တွင်၎င်း၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းများဖြစ်သော Huawei P20 နှင့် P20 Pro အသစ်ကိုတင်သွင်းခဲ့သည်ဤအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါတို့အားပြောပြီ ဆောင်းပါး။ ဒီပွဲမှာတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကငါတို့ကိုစွန့်ခွာသွားတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသင့်ရဲ့ဖုန်းအသစ်ကိုပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားမှာတွေ့နိုင်ပါပြီ။ Huawei P20 Lite အကြောင်းပါ။ အဆိုပါသုံးခု၏စျေးအသက်သာဆုံးမော်ဒယ်။
အလွန်ခေတ်မီသောပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်ဆိုင်သောစက်ပစ္စည်း။ ဒါကြောင့်အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုပြသတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေရှိပါတယ်။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပြီးသားဒီထဲမှာထင်ရှားခဲ့သည် Huawei P20 Lite ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်. ကျွန်တော်ဘာကိုမျှော်လင့်နိုင်မလဲ?
သူ့အစ်ကိုတွေလိုပဲ ပစ္စည်း၏ဒီဇိုင်းကိုထစ်၏ရှေ့မှောက်တွင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်။ အသုံးပြုသူများစွာကသိပ်နားမလည်တဲ့အသေးစိတ်။ ကျနော်တို့ကအခြားမော်ဒယ်များအတွက်မြင်ကြပြီထက်အများကြီးပိုပြီးသတိပညာထစ်ကြောင်းမြင်နိုင်ပါသည်ပေမယ့်။ ထို့ကြောင့် Huawei P20 Lite ၏မျက်နှာပြင်ကိုအသေးစိတ်လွှမ်းမိုးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါ့အပြင်အဲဒါဟာသင်ရှာဖွေနေတဲ့အရာဖြစ်တယ် Android P နှင့်အတူလာမည့်အနာဂတ်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုအသုံးချပါ.
မင်းတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ဖုန်းသတ်မှတ်ချက်များကိုပြီးသားထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြသည် တရားဝင်ပဲရစ်မှာကျင်းပဒီဖြစ်ရပ်မှာ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအောက်တွင်ထားခဲ့ပါ။
1 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Huawei P20 Lite
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Huawei P20 Lite
Huawei P20 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ P20 Lite ကို
operating system EMUI 8.0 ဖြင့် Android 8.1 Oreo
ဖန်သားပြင် resolution (5.84 x 2.244) Full HD + ဖြင့် ၅.၈၄ လက်မ LCD
Processor ကို 659
GPU ကို -
နောက်ကင်မရာf/ 16 aperture ဖြင့်2+ 2.2MP RGB
ရှေ့ကင်မရာf/ 16 ကို aperture နှင့်အတူ 2.0 အမတ်
ဆက်သွယ်မှု Bluetooth 4.2 LTE USB အမျိုးအစား C
ဘက်ထရီ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနှင့်အတူ 3.000 mAh
စြေး 389 ယူရို
ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းသည်လည်းaရှိခြင်းအတွက်ထင်ရှားသည် နောက်ကျောအစိတ်အပိုင်းအရည်ကြည်လင်၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဖုန်းကိုပြုလုပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အဆင့်မြင့်သောဖုန်း၏အသွင်အပြင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Huawei သည်စက်ကိရိယာနှင့်ပါ ၀ င်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအထူးဂရုပြုခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောနည်းလမ်းဖြင့်တန်ဖိုးထားရမည့်အရာ။ ဖြည့်စွက်ကာ အခြားဖုန်းနှစ်လုံး၏ဒီဇိုင်းများကိုကောင်းစွာဖြည့်ဆည်းပေးသည် ယနေ့တင်ပြခဲ့သည်
Huawei P20 Lite ၏အတွင်းပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့အားသင့်စရာများစွာမရှိပါ။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည် Kirin 659 ကိုပရိုဆက်ဆာအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်, Huawei P10 Lite နှင့်အတူတူပင်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ရွေးချယ်ထားခြင်းကြောင့်ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပုံရသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်4GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၆၄ GB ပါဝင်သည်။ ကောင်းသောသတ်မှတ်ချက်များသူတို့နှမြောဖို့ဖြည့်ဆည်းကြောင်း။
operating system အတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်စိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ Android တွင်နောက်ဆုံးပေါ် version ကိုတွေ့ရသည်။ Android Oreo ကိုမူလတပ်ဆင်ထားမှာပါ။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်ဤ operating version ၏အားသာချက်များကိုအစကတည်းကခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ဖုန်းတွင်နောက်ကျောဘက်ကင်မရာနှစ်လုံးပါရှိသည်။ 16 +2MP ကင်မရာဖြင့်လောင်းပါ။ ဤပေါင်းစပ်မှု၏ကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့ကဲ့သို့သောရေပန်းစားသော bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုခံစားနိုင်သည်။ ဖုန်း၏ရှေ့ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် 16 MP ကင်မရာနှင့်အခြားအာရုံခံကိရိယာ။ ၎င်းသည် Huawei P20 Lite တွင်မျက်နှာသော့ဖွင့်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည့်အာရုံခံကိရိယာဖြစ်သည်။
Huawei P20 Lite ကိုအရောင်လေးမျိုးဖြင့်ရောင်းချမည်။ ဒီကိစ္စမှာသူတို့ဟာ high-end မော်ဒယ်လ်နှစ်ခုမှာငါတို့တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့အရောင်တွေမတူကြဘူး။ ဤကိစ္စတွင်, ဖုန်းဖြစ်လိမ့်မည် ရွှေ၊ အနက်၊ အပြာနှင့်ပန်းရောင်များကိုရရှိနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီကိရိယာမှာကြိုက်နှစ်သက်နေတဲ့ Twilight လေသံကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရပါ။
ကိရိယာ၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုယူရို ၃၆၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ အစပိုင်းမှာသူတို့ဟာယူရို ၃၈၉ ဖြစ်မယ်လို့သတင်းတွေရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ဖုန်းကနောက်ဆုံးတော့နည်းနည်းတော့သက်သာတော့မှာပါ။ ငါတို့တိုင်းပြည်တွင်ဒီစျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ယင်းကိုထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်၊ Huawei P20 Lite ကိုယခုအခါကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်တရားဝင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ယခုဝယ်နိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei P20 Lite - ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားကဒီအဆင့်ကိုပဲအလောင်းအစားလုပ်တယ်
Microsoft Edge browser ကိုယခုအခါ Android tablet များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်
Huawei P20 နှင့် P20 Pro: Huawei ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်ရှိ